Fanatsarana lalàm-pifidianana : eo ihany ny ahiahy itakiana fifidianana marina | NewsMada
Fanatsarana lalàm-pifidianana : eo ihany ny ahiahy itakiana fifidianana marina
An-dalana ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana. Hanao ahoana ny fifidianana amin’ny 2018? Eo ihany ny ahiahy itakiana fahamarinana, fangaraharana…
“Tokony hadio sy marina ho an’ny vahoaka ny fifidianana, ho marimaritra iraisana eken’ny rehetra ny lalàm-pifidianana. Mba tena hevitry ny vahoaka ary avy aminy tokoa no hivoaka amin’ny voka-pifidianana.”
Izay ny anisan’ny fanehoan-kevitry ny firaisamonina sivily, hetsika Rohy, Ramarosaona Faraniaina, tamin’ny fakan-kevitra hanatsarana ny lalàm-pifidianana, miainga amin’ny vokatry ny asan’ny vaomiera iraisan’ny minisitera nandrafitra izany mialoha ny hanaovana azy ho volavolan-dalàna, teny Anosy, omaly.
“Tokony hisy fifanakalozan-kevitra izy io, fa tsy fanapahan-kevitra milatsaka avy any ambony”, hoy ny filohan’ny Tim, Ravalomanana. Mba tena misy fakan-kevitra ny antoko politika, marimaritra iraisana hiaraha-manapaka. Mila manao fifanekena amin’izay tsy maintsy arahina ny kandidà, fa tsy manao izay saim-pantany fotsiny ny sasany.
Ho tratra amin’ny fotoana ilàna azy ny lalàm-pifidianana?
“Misy dimy na enina ny lalàna tsy maintsy holanina amin’ity taona ity, raha tiantsika hilamina ny fifidianana amin’ny herintaona”, hoy ny avy amin’ny Sefafi, Rabenarivo Sahondra. Tsy ho vita amin’ity taona ity ireo lalàna ireo, fa tsy maintsy hanao fivoriana tsy ara-potoana ny parlemanta amin’ny taona ho avy.
“Rehefa nanapa-kevitra hoe hamboarina sy hohavaozina ny lalàm-pifidianana, tokony ho naka fotoana malalaka ary ny rehetra no manao azy. Raha an-kamehana no anaovana azy, zavatra an-kamehana koa no mivoaka eo”, hoy ny sekretera jeneralin’ny Teza, Randriamandrato Ihanta. Tsy ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny Antenimierampirenena izao ny lalàm-pifidianana.
Mila fitoniana maharitra ny firenena
“Tsy miala amin’ny soso-kevitra niainga tamin’ny fakan-kevitra ny nataon’ny vaomiera iraisan’ny minisitera”, hoy ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana. Mba hisian’ny mangarahara, aleo ny fitondram-panjakana hitondra ny vokatry ny asa amin’ny mpanao politika, firaisamonina sivily… Mba tsy ho tompon-trano mihono amin’ny lalàna hifehy ny fifidianana ny vahoaka, ary hisy ny fametrahana fitoniana maharitra.
Hampisy fitoniana ve ny hosoka sy hala-bato tamin’ny toy ny tamin’ny fifidianana kaominaly, jolay 2015? Na ny fandrahonana sy fividianana mpifidy tamin’ny fifidianana loholona, desambra 2015. Eo hatrany ny ahiahy, na tsara toy inona aza ny lalàm-pifidianana… tsy hajaina sy tsy hampiharina?